यस्तो छ पाल्पाका क्वारेण्टाइनको हालत ! – KhabarKhurak
पाल्पा , २० जेठ । भारतको जयपुरबाट आएकी जिल्लाको तानसेन नगरपालिका ९ दमकडाकी जयन्ती बिकलाई क्वारेण्टाइनमा बसिरहँदा पनि दुखले छोडेन् । आफु कसरी सुरक्षित रहने हो भन्ने एउटा पिरलो छ । तर त्योभन्दा बढी चिन्ता बिरामी श्रीमानको अवस्था के हुने हो? भन्ने छ उहाँलाई ।
जयन्तीका श्रीमान् मानबहादुर बिक मुटुका बिरामी छन् । भारतको जयपुरमा मुटुको अप्रेसन गरेर थप उपचार गराउँदै आएका मानबहादुर अहिले क्वारेण्टाइनमा हुनुहुन्छ। पछिल्लो ६ महिनामा नियमित परीक्षणका लागि जयपुर पुगेको मानबहादुरको दम्पत्ति लकडाउनका कारण तीन महिना उतै रोकिनु प¥यो ।
जेनतेन नेपाल आएका उनीहरू अहिले तानसेन नगरपालिकाले निर्माण गरेको बतासेस्थित साइन्स क्याम्पसको एउटा कोठमा बसिरहेका छन् । उनीहरू गएको ७ दिनदेखि यहाँ बसिरहेका हुन् । उनीहरू एक्लै छैनन्। वरिपरी सुत्ने अन्य ८ जना छन् । जुन मापदण्ड विपरित नजिकको दुरीमा बस्नु परेको छ। ९ जना पुरूष रहेको एउटा कोठामा जयन्ती एक्लो महिला हुनुहुन्छ। उहाँ दिनरात त्यहिं बस्छिन्। त्यहि कोठामा बिरामी श्रीमानको समेत उनले रेखदेख गर्नुपरेको छ ।
यस्तो अवस्थाको क्वारेण्टाइनमा बस्नुपर्दा आफुलाई जोखिम महसुस भएको जयन्तीले बताउनुभयो। ‘आफुसँगै बिरामी श्रीमानसमेत जोखिममा हुनुहुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘औषधि खुवाउन पानीसमेत समयमा पाउँदिन । कोरोनाले भन्दापनि नियमित औषधि खान नपाएर मरिने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’
गन्हाएको पानी खाएर बस्नु परेको भारतको मुम्वइबाट आएका तानसेन नगरपालिका–११ का भोजराज खातीले गुनासो गर्नुभयो । ‘छतमा रहेको पानी पिउनु परेको छ, खाना खानसमेत समयमा पाइदैन्’ उहाँले भन्नुभयो ‘भेंडाबाख्राजस्तै राखिएको छ। यस्तो अवस्थाले कोरोनाले संक्रमित हुने पक्का छ ।’
दिल्लीबाट आएका तानसेन १४ अर्गलीका कृष्ण थापाको पनि गुनासो उस्तै छ । ‘दिल्लीबाट आउँदा त्, जसोतसो कोरोना संक्रमणबाट बाँचियो’ उहाँले भन्नुभयो ‘यहाँको अस्तव्यस्तताले कोरोना सर्ने हो कि भन्ने पिरलो छ ।’ जति दिन बस्न परेपनि आफ्नै गाउँको क्वारेण्टाइनमा बस्न तयार रहेको थापाले बताउनुभयो । शौचालय समेत प्रयोग गर्ने अवस्थामा नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
तानसेन नगरपालिका ९ का वडाध्यक्ष हरीसुमर रेग्मीले तत्काल वडाको क्वारेण्टाइनमा ल्याउन मिल्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। ‘बरू तानसेनमै रहेको अन्य क्वारेण्टाइनमा सार्नको लागि पहल गर्ने छु’ उहाँले भन्नुभयो ‘तत्काल वडामा ल्याएर राख्ने अवस्था छैन्।’
वडा नम्बर १४ का वडाध्यक्ष कमल रानाले स्थानीयको विरोधले उनीहरूलाई गाउँको क्वारेण्टाइनमा ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो । उनीहरूको प्रारम्भिक परीक्षण नहुँदासम्मा गाउँमा ल्याउन समस्या भएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
यहाँ होल्डिङ क्वारेण्टाइन मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने हेल्पडेस्क सचिवालय सदस्य सुनिल अधिकारीले बताउनुभयो । होल्डिङ क्वारेण्टाइनका कारण यहाँको क्वारेण्टाइनमा बसेकाहरूलाई समस्या परेको उहाँको भनाई छ । तत्काल क्वारेण्टाइन अन्त सारेर यहाँ होल्डिङ क्वारेण्टाइन मात्र संचालन गर्नु पर्नेमा अधिकारीले जोड दिनुभयो
नगरप्रमुखले सम्बन्धित मानिसहरूलाई आफ्नै वडामा लैजान निर्देशन दिइसकेको तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराज वेलवासेले बताउनुभयो । ‘सदरमुकाम भएकोले जिल्लाभरीका मानिसहरूको अवस्था तानसेन नगरपालिकाले हेर्नु परेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिले आफ्ना मानिसहरू तत्काल लगेर उतै व्यावस्थापन गर्नुपर्छ ।’ सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगर्ने हो भने जिल्लाको स्थिति भयावह हुने खतरा रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वेलवासेले बताउनुभयो । अन्य स्थानीय तहले भने आफ्ना मानिसलाई सम्बन्धित गाउँकै क्वारेण्टाइन लगेर व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।